"I'm sorry "လို့ သင်ဘယ်တော့မှ ပြောစရာ မလိုတဲ့ ကိစ္စ ၆ ခု
Home Lifestyle “တောင်းပန်ပါတယ်လို့”ဘယ်တော့မှပြောစရာမလိုတဲ့ကိစ္စ၆ခု
ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ မြောက်မြားစွာသောလူတွေဟာ အခြားသူတွေက၀ေဖန်မှုတွေပိုမိုများပြားလာကြပြီး သူတို့အချိန်အများစုကို အခြားလူတွေရဲ့နေထိုင်မှုတွေအပေါ်လိုက်၀ေဖန်နေတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ သင့်စွမ်းအားတွေကို သူတို့အတွက် ပေးဆပ်ပစ်လိုက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့လူနေမှုဘ၀ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ ဒါမှမဟုတ် သင်ဘယ်သူတွေနဲ့ အချိန်ဘယ်လို ဖြုန်းတီးတာတွေစတဲ့အရာတွေ အ တွက် ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှရှင်းပြနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားချိန်မှာ မင်းပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားနေရမယ်၊ မင်းရှင် သန်နေရတဲ့ဘ၀ကိုချစ်မယ်ဆိုတာတွေကမှ တစ်ကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေပါပဲ။
မင်းရဲ့အမှန်တရားနဲ့အသက်ရှက်နေထိုင်ခြင်းအတွက် ဘယ်သူ့ကိုရှက်နေဖို့လိုအပ်နေသေးလို့လဲ? ဘယ်သူ့ကိုတောင်းပန်ဖို့လိုအိပ်ဦးမှာလဲ? အခြားသူတွေကမင်းဘ၀ကို ဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာ လုံး၀အဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့် အောက်ကဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေအတွက် ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။
တစ်နည်းနည်းနဲ့ မင်းနှလုံးသားကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တာကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ အတ္တကြီးတယ်လို့ ၀ိုင်းပြောကောင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကယ်က အခြားလူတွေဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို မင်းဟာမင်းလုပ်ယူနေရတယ်ဆိုတာ မင်းမမှားပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်သာသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတာဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မှားယွင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာအတွက် တခြားလူတွေရဲ့ သင်ကြားပြောဆိုမှုကို စောင့်နေမယ့်အစားကိုယ့်ဘ၀အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရှင်သန်တတ်ပြီဆိုရင် မင်းဟာ ဘ၀ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချိုးအကွေ့တွေကို ကျွမ်းကျင်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ ကျွနုပ်တို့ဘ၀ကို ဘယ်လိုရှင်သန်ရပ်တည်ကြမလဲဆိုတာအတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အ၀ တာ ၀န်ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှသာ တခြားသူတွေကို အကူအညီပေးအပ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မကူညီယိုင်နဲ့နေတဲ့လူက တခြားလူတွေကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ? ဒီတော့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်တို့၊ အတ္တကြီးတယ်တို့၊ မင်းကို ၀ေဖန်တိုက်ခိုက်လာရင်တောင် စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ လိုက်ရှင်းပြနေဖို့မလိုပဲ မင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲဦးစားပေးပါ၊ ဒီအတွက်၀ေဖန်တိုက်ခိုက်လာရင် Do Not Careလို့ပဲပြောလိုက်ပါ။
ဘ၀မှာ အများကြီးးလိုချင်တာကြောင့် မင်းကိုလောဘကြီးသူတစ်ယောက်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ လူတွေကတော့ပြောကြမှာပဲမလား? အဲ့ဒါတွေက မင်းကိုရည်မှန်းချက်ကြီးမားသူတစ်ယောက်ဖြစ်စေမှာပါ။
ဆိုလိုတာကကွာ မင်းမှာ ပန်းတိုင်တွေ၊ အိမ်မက်တွေ ရှိပြီး မင်းလုပ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ တခြားလူတွေကတော့ မင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့ အိမ်မက်မက်နေတဲ့လူ၊ ဘ ယ်တော့မှပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပြောကြမှာပဲ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ဘာတွေးတွေး ဘာပြောပြော မင်းဒါတွေကိုအလေးထားနေဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်မက်အကြီးကြီးတွေမက်ရင်း ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုမျှော်လင့်ရင်း ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကို လက်မခံပါနဲ့။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
သွားပါ၊ အဆုံးထိမင်းစိတ်နှလုံးသားနဲ့ရွက်လွှင့်သွားပါ၊ စကြာ၀ဋာကြီးက မင်းတစ်ခါမှစိတ်ကူးမယဉ်ဖူးတဲ့အရာတွေနဲ့မင်းကို suprise လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာဘယ်တော့မှ လမ်းမဆုံးစေနဲ့။
ကမ္ဘာကြီးက အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်၊ လူတော်တော်များများကလည်း တခြားလူတွေကို ဂရုစိုက်တာနဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြပြီး ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုယ်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျတော့မေ့နေကြတယ်၊ ပြောရရင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စတွေကို မေ့သွားကြတယ်။
ပြောရရင်ကွာ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ခွက်ကို ပြည့်အောင်မဖြည့်ရင် တခြားလူတွေကိုအနည်းငယ်လေးတောင် ၀ေမျှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမလား? ကိုယ့်အတွက်တောင် မျှော်လင့်စရာမရှိရင် တခြားလူတွေအတွက် ဘယ်လိုသွားမျှော်လင့်နိုင်မလဲ? မဟုတ်ဘူးလား? ကိုယ့်ကိုကိုယ် စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကငါတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း လိုအပ်တယ်မလား၊ တခြားလူတွေက မင်းကို သူတို့အတွက် ကြည့်ရှုစောင့်ကြောင့်ဖို့ဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလုပ်လို့ ငြင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်း တောင်းပန်တာတွေ၊ စိတ်မကောင်းပါဘူးတွေလုပ်မနေပါနဲ့။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်တွေမပျောက်စေနဲ့၊ တစ်ကယ်လို့ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်သွားဖို့ဘိုကင်လုပ်ထားတာဖြစ် ဖြစ်၊ နေ့ခင်းမှာSpa တစ်ခုခုသွားဖို့ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ် အာ့ဒါတွေကိုအားနာပြီးမဖျက်ပဲ ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုအရင်လုပ်ပါ။ တ ခြားလူတွေလိုချင်တဲ့အချိန်ကို မင်းမပေးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ ၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့။ အားနာတာ မကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲ။
မင်းနဲ့ချိန်းတွေ့ရမယ့်လူ မင်းနဲ့ကြိုက်ရမယ့်လူကို အခြားလူတွေဆုံးဖြတ်တာလုပ်စေချင်လား၊ မင်းဘာသာမင်း မိန်းကလေးပဲကြိုက်၊ ယောကျ်ားလေးပဲကြိုက်ကြိုက်၊ လိင်တူချင်းပဲကြိုက်ကြိုက် မင်းကိုရှက်ရွံအောင်လာလုပ်တဲ့သူတွေကို ခွင့်မပြုပါနဲ့။ လိင်တူချစ်တယ်ဆိုတာ တောင်းပန်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့မွေးရာပါသွေးထဲက ဟော်မုန်းကြောင့်ပဲမလား။
မင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေက မင်းစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းလေ ၊သူတို့နဲ့မှမဆိုင်တာ၊ မဟုတ်ဘူးလား? မင်းအမှန်တစ်ကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချိန်းတွေ့ပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအကုန်လုံးမှာ အတူတူပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ မင်းဘယ်သူဘယ်၀ါနဲ့ချိန်းတွေ့တာကို လက်မခံဘူး ဘာညာ၀ေဖန်တဲ့သူဆိုသူဟာ မင်းဘ၀ထဲမှာ မဲနက်နေတဲ့အစက်အပြောက်ပါပဲ။ မင်းဘ၀ကမင်းပါပဲ။
အချို့လူတွေက ကျွန်တော်တို့ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုဖော်ထုတ်အရှက်ကွဲချင်ကြတယ်၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ချင်ကြတယ်၊ မင်းဘ၀နဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့ဘယ်လိုပဲ၀ေဖန်ဖန် မင်းမှာအတွေ့အကြုံတွေ ရခဲ့ပြီ၊ သင်ခန်းစာတွေတတ် မြောက်ခဲ့ပြီဆိုတာ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။
အတိတ်ဆိုတာ တစ်ကယ်က အတွေ့အကြုံတွေကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပဲမလား? ဒါကြောင့်သင့်ကိုနောင်တရအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆို ခွင့်မပြုပါနဲ့၊ ငါမှားခဲ့တယ်ကွာပြောစရာမလိုပါဘူး။ အတိတ်ကဘ၀ကို ဘယ် တော့မှသတ်လို့မရပါဘူး၊ ဒီတော့ရှင်သန်ပါ မာမာထန်ထန်ရှင်သန်ပါ၊ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း အသက်ရှုပါ။
လူတစ်ယောက်ကို သဘောတူညီမှုမရှိပဲ အဲ့ဒီလူကို ကျွန်တော်တို့လေးစားလို့ရပါတယ်။မင်းလည်း မင်းအမြင်အရသဘောမတူနိုင်တဲ့လူကို လေးစားမှုပေးလို့ရပါတယ်၊ တချို့လူတွေကတော့ ငါနဲ့မတူငါ့ရန်သူ ဆိုပြီး လေးစားမှုတွေကို မြောင်းထဲလွှင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။
အများကြိုက် ရွေးချယ်မှု ဆုံးဖြတ်မှု အတွေးအခေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြဖို့ ဘယ်တော့မှ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာသိမ်းဆည်းထားရင် ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကောင်းဆုံးအတွေးအခေါ်တွေဆိုတာ မကြာခနဆိုသလို ထင်မြင်ချက်နဲ့မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေကလာတတ်ကြတာပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ ထင်မြက်ချက်တွေမင်းတောင်းပန်ဖို့မလိုသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ သူမှန်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်သူ့ကိုအားနာဖူးလို့လဲ?
ရဲရင့်ပါ။ ကဲအပေါ်က အချက်တွေက ကိုယ်ပြောလိုက် လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေအတွက် I m Sorry ဖြစ်စရာမလိုတာတွေပါပဲ၊ ဒါတွေကိုလုပ်ကြည့်ရင် အခုထက်ကောင်းတဲ့ အားနာတတ်တဲ့ဘ၀က မင်းလွတ်မြောက်သွားပြီး ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တစ်ခုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်..
Previous articleညိုမည်းနေတဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေကို ပြန်လည်ဖြူဖွေးလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ
Next articleကိုယ့်အိမ်က အိမ်သုံးပစ္စည်း ကိရိယာတွေကို အမြန်ဆုံးပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ အသုံးပြုပုံအမှားများ